Ariana yi 5 bayotywe esisigxina 25 umdlalo slot payline ukusuka Microgaming. Ukuze kulunge ngokuba ubemndulule Microgaming-WCED kwi phantsi themed imidlalo slot. Ukubonelela nefuthe elithambileyo uzole; umxholo blue somdlalo kuya kufuneka ukuba udlala ixesha elide.
Elwandle eziblowu na imvelaphi obufezekileyo ukuze Ariana intle ukudada ngeenxa. Simmering enelanga buthathaka; nezikhongozelo ubutyebi, ukhula zasemanzini kunye nembono yesingqengqelo elwandle iisimboli eliphezulu yokuhlawula lo mdlalo slot. Le miqondiso ikhadi 10, J, Q, K A kubonakala kancinane ayibulale xa siyibona i bhobhile.
imiqondiso Ukwandisa hlobo luza ukugcina abo lokuwina esiza shinyi yaye ngokukhawuleza. Ke inkalo umdla, apho isimboli ngokupheleleyo elibhalwe phezu bayotywe lokuqala kwandisa zonke iisimboli matching eliphezulu kwelinye bhobhile. Oku kwenzeka kuphela xa iisimboli matching ziyinxalenye payline eliphumelelayo.
adakasa: Olu Arian Okubhaliweyo luphawu zasendle. Iya endaweni enye iisimboli ngaphandle isimboli usichithachithe. Uphawu lasendle lingaba eDibanisa phezu bayotywe lokuqala ngexesha aziyeki ivideo.
Uchithachitha: Uphawu Starfish ke sasaza oya kuhlawula uyaphumelela usichithachithe. Evelayo naphi na kwi bhobhile; uyakwazi kuxhokonxa aziyeki ivideo osemqoka nanini 3 okanye ngaphezulu le miqondiso zibonwa.
Uya kuphumelela 15 aziyeki ivideo leyo izakufunyanwa kwakhona xa iisimboli ziinkwenkwezi zibonwa ngexesha aziyeki ivideo.
Ukwanda osemqoka isimboli ubonakale kude ngexesha aziyeki ivideo ziyavela. apha kwakhona, uphawu ngokupheleleyo elibhalwe phezu bayotywe kuqala, kwandisa yonke matching iisimboli eziphakamileyo nesimboli Wild, kwelinye i bhobhile.
min / Max Bet basonta nganye (£ / $ / €): 0.25 - 125.0
jackpot (£ / $ / €): ixhomekeke ku 30,000 (aziyeki ivideo)
The Ariana ikwalolunye umdlalo phantsi slot themed. Lo payline imiselweyo kuqwalaselwa engxakini ngenxa umdlali nemalanana zokubeka. Kuko konke, ibe ngumdlalo elula amathuba ewinileyo ezizodwa.